Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Shirarka » Wadnaha Barnaamijka Waxbarashada Ameerika ee IMEX
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Education • Warshadaha Warshadaha • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dalxiiska • Wararka Mareykanka
"Hadda waa waqtigii wax walba dib looga fikiri lahaa," ayay tiri Carina Bauer, oo ah Maamulaha Kooxda IMEX. “Waxaan mar walba aaminsanahay in naqshadeynta dhacdada ay tahay xirfad aasaasi u ah xirfadleyda warshadeena. Hadda waa waajib inaga oo dhan inaan xoojinno soo kabashada waaxdeenna, iyo adduun weynaha oo dhan hab dib -u -soo -kabasho iyo waara u leh dhammaan annagoo xirfadahaan tijaabinayna. Waxaan abuurnay barnaamij waxbarasho oo keenaya feker cusub oo ku saabsan mustaqbalka kulanka iyo naqshadeynta dhacdada oo ay weheliyaan fadhiyo loogu talagalay joogtaynta dhabta ah, kala duwanaanshaha, aadanaha iyo tiknoolajiyadda mowduucyada kale. ”
Kooxda IMEX ayaa dib u fiirisay raadadkii waxbarasho ee sanadkan.
Barnaamijyada waxbarashadu waxay ka tarjumayaan caqabadaha warshadaha ee hadda jira iyo mudnaantooda.
Sannadkan, waxay soo bandhigaysaa Horumarinta Xirfad iyo Upskilling, Hal -abuurka Isgaarsiinta, Kala duwanaanshaha, sinnaanta, ka -mid -noqoshada iyo helitaanka, Hal -abuurka iyo Farsamada iyo Soo -kabashada Ujeeddada leh.
Barnaamijka barashada bilaashka ah ee IMEX Ameerika, oo ka dhacaysa Nofeembar 9 - 11 magaalada Las Vegas, ayaa lagu bilaabayaa Smart Monday, oo ay ku shaqeyneyso MPI, Nofeembar 8 waxayna sii wadataa aqoon isweydaarsiyo taxane ah, miisas mowduucyo kulul leh iyo siminaaro inta lagu jiro saddexda maalmood ee bandhigga. Sida had iyo jeer, bandhiggu wuxuu sidoo kale soo bandhigi doonaa mowduucyada maalinlaha ah ee MPI, faahfaahin buuxda halkan.
Kooxda IMEX waxay dib -u -fiirisay raadraacyadii waxbarasho sannadkan, iyagoo soo bandhigay Horumarinta Xirfad iyo Upskilling, Hal -abuurka Isgaarsiinta, Kala -duwanaanshaha, sinnaanta, ka -mid -noqoshada iyo helitaanka, Hal -abuurka iyo Farsamada iyo Soo -kabashada Ujeeddada leh si ay uga tarjumaan caqabadaha warshadaha ee hadda jira iyo mudnaanta.
Naqshadeynta Dhacdada si loo Awood siiyo Dadka & Meeraha
In Naqshad ula kac ah oo loogu talagalay soo kabasho ulajeed leh, Mariela McIlwraith, Madaxweyne Ku -xigeenka Joogtaynta iyo Horumarinta Warshadaha ee EIC, waxay faahfaahinaysaa sida Mabaadi'da ururka ee Soo -kabashada iyo Dhacdooyinka Joogtada ahi ay gacan uga geysan karaan dhaqaajinta awoodda dhacdooyinka si loo wado soo -kabashada ku salaysan dadka, meeraha iyo barwaaqada.
Wadashaqaynta naqshadaynta dhacdada ayaa fadhida hore iyo badhtamaha #EventCanvas: Khariidadaada kulamada aan caadiga ahayn. Roel Frissen iyo Ruud Janssen, oo ah hal-abuurayaasha #EventCanvas iyo wada-aasaasayaasha Ururinta Naqshadaynta Dhacdada, waxay rabaan inay ka caawiyaan kooxaha inay eegaan 'himilooyinkooda sawirka weyn' ayna keenaan daneeyayaal ballaadhan geedi-socodka naqshadaynta.
Sideen u abuuri karnaa waaya -aragnimo macno leh oo dhaqaajiya dhagaystayaasha? Tani waa mid ka mid ah caqabadaha lagu xalliyay EventMB's Shaybaarka Hal -abuurka Dhacdada™. Kooxdu waxay la wadaagi doontaa tusaalooyinka nolosha dhabta ah ee naqshadaynta dhacdada loo adeegsaday in lagu wado hawlgelinta iyo sidoo kale hababka ugu wanaagsan ee miisaaniyadda iyo hubinta dakhliga ka yimaada kafaala-qaadaha.
Joogtaynta waa in lagu daraa bilowga geedi socod kasta oo naqshadaynta dhacdada. Taasi waa sida ay sheegtay Courtney Lohmann, Agaasimaha Mas'uuliyadda Bulsho ee Shirkadda PRA. Fadhigeedii Joogtayntu waa furaha naqshadaynta dhacdadaada wuxuu ku doodayaa kiis adag oo loogu talagalay joogtaynta isku dhafan marka la dejinayo yoolalka iyo ujeeddooyinka.
Adeegsiga naqshadda dhacdada si loo bixiyo 'kacaan dib -u -soo -kabasho' iyo barashada dabeecadda si looga caawiyo ka -qaybgalayaashu inay yeeshaan caafimaad, farxad iyo waayo -aragnimo dhacdooyin macno leh ayaa lagu daboolay Mustaqbalka waxaan rabnaa: Kicinta kacaanka dib -u -soo -nooleynta. Waxay ka cusub yihiin shaqadooda ku saabsan Kacaanka Dib-u-soo-nooleynta IMEX iyo Warbixinta Dabeecadda Meesha, Guy Bigwood, Madaxa Beddellaha ee GDS-Dhaqdhaqaaqa, iyo Janet Sperstad, Agaasimaha Kulliyadda Madison College, ayaa si faahfaahsan u bixin doona cilmi-baaristooda xeeldheer.
Gacanta Caawinta Farsamada
Khibradda dhacdada waxaa lagu wanaajin karaa teknolojiyad cusub Maritz-na waxay la wadaagi doontaa barashadooda gacanta hore Carqaladeynta waqtiga soo kabashada: Maritz wuxuu dib u soo nooleynayaa waayo -aragnimada dhacdada iyada oo loo marayo tiknolojiyad cusub. Aaron Dorsey, Agaasimaha Sare ee Maareynta Badeecada iyo Amy Kramer, Suuqa iyo Hoggaamiyaha Hal -abuurka Waxsoosaarka, waxay wadaagaan barashada ururkooda ee masiibada, caqabadaha ay la kulmeen, iyo qas -wadayaal cusub oo ay ka heleen sheekadan dab -damiska ah.
AI waa teknolojiyad kaxayn karta ka -qaybgalka dhagaystayaasha sharraxaya Michael Campanelli, oo ah Maamulaha Guud ee Chillwall AI: “Haddii aad rabto inaad noqoto suuqgeeye wanaagsan, soo bandhig khibrad booqde sare, ama kor u qaad dakhliga, fahamka tilmaamaha shucuureed waa muhiim. AI way ku caawin kartaa… si baaxad leh ”. Michael ayaa bixin doona fadhiga Go'aaminta go'aaminta iyo awoodda AI-ku-tiirsanaha aadanaha.
Safarada Dhabarka & Safarada Saxaraha
Ka sokow waxbarashada sagxadda bandhigga, ka -qaybgalayaashu waxay sidoo kale sahamin karaan goobta cusub ee IMEX America, Mandalay Bay, oo ah socdaallo taxane ah. La kulanka dalxiisyada xarunta dhexe leh MGM Resorts siiyaan fiiro gaar ah hawlgalka gadaal-ka-qabashada ee miciinka iyo xarunta shirarka. Kooxda MGM oo ay weheliyaan MeetGreen, EIC iyo GES, ayaa sidoo kale kaqeybgaleyaasha u kaxayn doona lamadegaanka Nevada si ay u booqdaan MGM Resort's Mega Solar Array oo qayb ka ah Cabbiraadda iyo maareynta dhacdada raadadka kaarboonka & dalxiiska soo -dhoweynta qorraxda.
Daawo Agaasimaha IMEX ee Agaasimaha & Dhacdooyinka, Dale Hudson, iyo La -taliyaha Sare ee La -talinta & Xiriirka Warshadaha, Natasha Richards, oo ka doodaya barnaamijka af -hayeenka ballaaran, raadadka cusub iyo hindisaha show cusub.
Kooxda IMEX waxay dib u qaabaysay barnaamijkeedii waxbarashada onlaynka ahaa iyo shaqadii goobidda. Soo -booqdayaasha IMEXAmerica.com waxay hadda ku raadin karaan mowduuc, qaab, eray -fure iyo maalin iyo sidoo kale codsiyada shaandhooyinka. Tag Raadinta Barnaamijkeena Dhacdada.